OTU ESI EDEGHARI EDEREDE N'IME OKWU - OKWU - 2019
Dezie ederede n'ime akwụkwọ MS Word
Na ọnọdụ zuru ezu nke ọnọdụ, gị, dịka onye ọrụ nke netwọk mmekọrịta nke VKontakte, nwere ike ịdị mkpa ka iwelie ọkwa nke nzuzo gbasara ndepụta egosipụta nke ibe na obodo. N'isiokwu a, anyị ga-atụle otú i nwere ike isi zoo ozi a site na ndị si mba ọzọ.
Ịhazi mpaghara nzuzo
Nke mbụ, rịba ama na na mgbakwunye na ngọngọ ahụ na akwụkwọ ndị mara mma, ị nwere ike zoo ngalaba na ndepụta nke otu. Ọzọkwa, ntọala nzuzo, nke anyị tụlere n'ụzọ ụfọdụ na isiokwu ndị bu ụzọ, na-ekwe ka anyị na-ahapụ ohere na ndepụta nke obodo maka ụfọdụ ndị ọrụ.
Esi zoo ibe VK
Zoo ndị debanyere aha VK
Esi zoo ndị enyi VK
Na mgbakwunye na nke dị n'elu, rịba ama na ọ bụrụ na ị kwuru kpọmkwem obodo n'ime "Ebe ọrụ"mgbe ahụ ọ ga-adịkwa mkpa ịzobe. Enwere ike ime nke a n'enweghị nsogbu ọ bụla, na-esote na ntughari ahụ dịka ntuziaka pụrụ iche.
Hụkwa: Otu esi ejikọta na òtù VK
Usoro 1: Zoo otu
Iji nwee ike zoo ìgwè otu VKontakte, ị ga-ebu ụzọ banye ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-egosipụta ya na ngọngọ pụrụ iche nke gosipụtara mgbe a meghere ngalaba ahụ. "Gosi ozi zuru ezu".
Akụkụ a nke isiokwu ahụ na-agụnye ịchekwa mpaghara naanị ụdị "Otu"ma ọ bụghị "Ọha Ọha".
Banye na saịtị VK ma mepee menu isi site na ịpị na avatar gị n'akụkụ akuku aka nri.
Site na ndepụta nke ngalaba ịkwesịrị ịhọrọ "Ntọala".
Iji igodo nsoroụzọ n'akụkụ aka nri nke windo gbanwee na taabụ "Nzuzo".
Mmetụta niile, nke ị nwere ike ịgbanwe ngosipụta nke ụfọdụ ngalaba, na-arụ na ngọngọ nhazi "My Page".
N'akụkụ ndị ọzọ, chọta "Onye na-ahụ ndepụta nke òtù m" ma pịa njikọ dị na nri nke aha nke ihe a.
Site na ndetu edepụtara ahọrọ uru kachasị mma maka ọnọdụ gị.
A na-atụ aro ka ị jiri ọnụọgụ nhọrọ "Naanị ndị enyi".
Mata ngwa ngwa na nhọrọ nhọrọ nzuzo nke nhọrọ ọ bụla dị iche iche dị iche iche, na-enye gị ohere ịhazi ndepụta nke otu dị iche iche dịka o kwere mee.
Mgbe ịtọsịrị njedebe kachasị mma, pịgharịa window ahụ na ala ma pịa njikọ ahụ. "Lelee otú ndị ọrụ ndị ọzọ si ele ibe gị".
A na-atụ aro nke a iji jide n'aka ọzọ na ntọala nzuzo ị debere kwekọrọ na atụmanya mbụ gị.
Ọ bụrụ na ị na-agbaso ndụmọdụ ndị a site na ntuziaka a, ndị otu ga-adị na ndị ọrụ dabere na ntọala ahụ.
Mgbe ịmechara nkọwa ahụ, a ga-atụle ntụziaka a zuru oke.
Nzọụkwụ 2: Zoo peeji ndị dị mma
Ihe di iche iche di iche "Akwụkwọ ndị nwere mmasị" bụ na ọ na-egosipụta ọ bụghị otu, kama obodo ndị nwere "Ọha Ọha". Tụkwasị na nke ahụ, n'otu ngalaba ahụ, ndị ọrụ ndị enyi gị ma nwee ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ndị debanyere aha nwere ike igosipụta.
Dị ka a na-achị, ọ dị mkpa ịnwe ma ọ dịkarịa ala 1000 ndị debanyere aha ka egosiputa na ngọngọ a.
Nchịkọta nke netwọk mmekọrịta bụ VKontakte adịghị enye ndị ọrụ ohere ohere iji zoo ngọngọ dị mkpa site na ntọala nzuzo. Otú ọ dị, na nke a, a ka nwere ihe ngwọta, ọ bụ ezie na ọ gaghị adabara ịchekwa ihu ọha na ebe ị bụ onye nwe ya.
Tupu ị gaa n'ihu ihe onwunwe, anyị na-akwado ka ị gụọ isiokwu gbasara iji mpaghara ahụ. "Akwụkwọ edokwubara".
Otu esi edebanye aha na onye VK
Otu esi ehichapụ ibe edokwubara VK
Ihe mbụ ị ga-eme bụ ime ka nkebi ahụ rụọ ọrụ. "Akwụkwọ edokwubara".
Iji isi menu VK, gaa "Ntọala".
Pịa taabụ "General" site na iji menu igodo di elu.
Na ngọngọ "Nchịkọta nhọrọ" jiri njikọ ahụ "Hazie ngosipụta nke ihe nchịkọta ihe".
Gaa na ihe"Isi ihe".
Pịgharịa site na ọdịnaya nke window ahụ ruo na isi "Akwụkwọ edokwubara" na n'akụkụ ya kwado ".
Jiri bọtịnụ "Chekwa"iji tinye aka ntanye nhọrọ na ndepụta menu.
Ihe omuma ndi ozo na adi na ngalaba. "Akwụkwọ edokwubara".
Na ibe profaịlụ kachasị, chọta ngọngọ ahụ "Akwụkwọ ndị nwere mmasị" ma mepee ya.
Gaa n'ihu ọha na ị ga-ezo.
Mgbe ị nọ na obodo, pịa akara ngosi ahụ nwere oghere ntụpọ atọ n'okpuru foto nke ọha na eze.
N'ime nhọrọ menu, họrọ "Nata Ihe Ịma Ọkwa" ma "Tinye na ibe edokọbara".
Mgbe ihe ndị a gasịrị, ọ dị mkpa ka ị wepu aha gị na mpaghara a site na ịpị bọtịnụ ahụ. "A debanyere gị" na ịhọrọ ihe "Wepu aha".
N'ihi omume ndị a, obodo ahụ zoro ezo agaghị egosipụta na ngọngọ ahụ "Akwụkwọ ndị mmadụ".
A ga-egosiputa nkwupụta ndị ọha na eze na ndepụta gị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdebanye aha ọzọ n'ihu ọha, mgbe ahụ ị ga-achọ ịchọta ya. Enwere ike ime nke a site n'enyemaka nke ịmara ọbịbịa, ọchụchọ saịtị, nakwa site na ngalaba ahụ "Akwụkwọ edokwubara".
Otu esi achọta otu VK
Otu esi eji search n'enweghi aha VK
Gaa na ibe edokọbara iji ihe kwekọrọ.
Site na menu igodo na ngalaba gbanye gaa na taabụ "Njikọ".
Niile ibe ndị ịdeworo aha ga-egosipụta dị ka isi ọdịnaya ebe a.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ị zonahụ na ngọngọ ahụ "Akwụkwọ ndị nwere mmasị" onye ọrụ nke nwere ihe karịrị 1000 ndị debanyere aha, mgbe ahụ ịkwesịrị ime otu ụzọ ahụ.
N'adịghị ka ọha na eze, ndị ọrụ na-egosipụta na tab "Ndị mmadụ" na ngalaba "Akwụkwọ edokwubara".
Biko rịba ama na ndụmọdụ ọ bụla dị na ntuziaka a metụtara ọ bụghị naanị maka ibe ọha mmadụ, kamakwa maka otu. Nke ahụ bụ, ntụziaka a, n'adịghị ka usoro mbụ, bụ ihe niile.
Usoro nke 3: Zoo ìgwè site na ngwa ngwa
Usoro a bara uru maka gị ma ọ bụrụ na ị na-ejikarị ngwa ngwa VKontakte maka ngwaọrụ dị mkpirikpi karịa ụdị zuru ezu nke saịtị ahụ. N'otu oge ahụ, ọrụ niile a chọrọ dị iche na ọnọdụ nke ụfọdụ ngalaba.
Malite ngwa VK ma mepee menu isi.
Gaa na ngalaba "Ntọala" jiri ngwa ngwa.
Na ngọngọ "Ntọala" gaa na mpaghara "Nzuzo".
Na ibe nke mepee, họrọ ngalaba. "Onye na-ahụ ndepụta nke òtù m".
Ọzọ na ndepụta nke ihe "Ònye na-ekwe" wepụta nhọrọ megide nhọrọ nke kwekọrọ na mmasị gị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ntọala nzuzo dị mgbagwoju anya, tinyekwa mgbakwunye ọzọ "Akwụsịbidoro".
Ntọala nzuzo nke arụpụtara adịghị achọ ịchekwa.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ntụziaka a na-ewepụ nchịkwa na-enweghị isi.
Nzọụkwụ 4: Anyị na-ezopụ mmasị na ibe weebụ site na ngwa ngwa
N'ezie, usoro a, dị ka nke gara aga, bụ ihe yiri mgbaaka nke ihe a na-enye ndị ọrụ nke nsụgharị nke saịtị ahụ. N'ihi ya, njedebe nke njedebe ga-abụ otu.
Iji nwee ike iji usoro a n'enweghị ihe ọ bụla, ị ga-achọ ime ka ngalaba ahụ rụọ ọrụ. "Akwụkwọ edokwubara" eji nsonaazụ nchọgharị nke saịtị ahụ, dị ka nke abụọ.
Gaa na profaịlụ ọha ma ọ bụ onye ọrụ ị chọrọ zoo site na ngọngọ ahụ "Akwụkwọ ndị nwere mmasị".
Pịa na akara ngosi nwere oghere nwere oghere atọ n'akụkụ aka nri nke ihuenyo.
Tinyere ihe ndị e depụtara, nyocha "Gwa banyere ndenye ọhụrụ" ma "Tinye na ibe edokọbara".
Ugbu a wepụ onye ọrụ site na ndị enyi ma ọ bụ wepu aha ya na ọha.
N'ihe banyere ndị ọrụ, echefula na mgbe ị kwusịrị nkwenye ị ga-enwe ike ile ụfọdụ ozi gbasara onye ọrụ ahụ.
Iji ngwa ngwa gaa na mpaghara dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ ọha na eze, mepee menu isi nke VKontakte wee họrọ ngalaba "Akwụkwọ edokwubara".
Tab "Ndị mmadụ" tinye ndị ọrụ ị denyere aha.
Tab "Njikọ" A ga-eziga otu ọ bụla ma ọ bụ ibe ọha.
Anyị na-atụ anya ka ị ghọta usoro nke ịchekwa peeji ndị mara mma na obodo VKontakte. Ihe kacha mma!